Ilaallata DhangiiwwanX fayyadamuu barbaaddu fila.
Ilaallatoota DhangiiwwanX ida'a, maqaa jijjiira, ni haqa.
Bakka ilaallata DhangiiX ida'uu dandeessutti qaaqa Ilaallata Ida'ii bana.
Deetaan ilaallataa fooya'insa haalojii galmeewwan jijjiiraman haaroomsa
Yeroo kakaafamu, ati unkaa galmee ilaallata deetaa dangeeffame kamiifiyyuu yeroo jijjiirtu ilaallata haalojii galmee "fooyya'aa" tti qindaa'a. Yoo hin kakaafamiin, jijjiiramani akkasii haalojii galmee gara "fooyya'aa" tti hin qindeessu.
Ilaallata DhangiiX filatame haqa. Ilaallata dhumaa haquu hin dandeessu.
Ilaallata dhangiiX filatame maqaa jijjira.
Bal'ina mul'isuu ykn dhoksuuf agarsiisa jijjiira.
Wantoota miseensa ammeetti kennamu/ramadu/tarreessa.
DhangiiX tiif jildeeffama tarreessa.
Qabduun kun ida'uu, gulaaluu,ykn miseensota haqu baafata xiqqaa qaba.
Bakka miseensota haaraa ida'uu dandeessutti qaaqa bana.
Bakka miseensota ammee fooyyeessuu dandeessutti qaaqa bana.
Miseensota ammee haqa. Miseensa dhumaa haquu hin dandeessu.
Akaakuuwwan deetaa mul'isa
Wanta haaraa (maalima, amala, dabarsa ykn jildeeffama)akka wanta xiqqaa, wanta ammeetti ida'uuf qaaqa bana.
Wanta filatame(maaliama, amala,dabarsa ykn jildeeffama) gulaaluuf qaaqa bana.
Wanta filatame(maaliama, amala,dabarsa ykn jildeeffama) haqa.
Title is: Naanneessa Deetaa